Were ezumike Blog! | Martech Zone
Were ezumike Blog!
Fraịde, Machị 23, 2007 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
M na mara mma nke ukwuu banyere agbali 1 quality post na m na saịtị sochiri a post na nke kacha mma njikọ na isiokwu na net maka ezi a mgbe ugbu a. N'abalị ikpeazụ m wee a Blog ezumike. Dị ka o kwesịrị, nkwụsịtụ blog ga-apụta na m dinara ụra ma hie ụra mgbe m na-agụ ihe. Ọ bụghị maka m.
N'abalị ụnyaahụ, m gara n'ihu na-emepe emepe Google Map maka ọrụ ebere obodo ebe a n'obodo. Ọ bụ ọrụ nnwere onwe na-atọ ụtọ nke enwere ike ghara iji ya rụọ ọrụ - mana ịbụ akụkụ nke ihe buru ibu karịa ka ị bụ bụ ezigbo ahụmịhe. O mere ka m mata ndị ọhụụ ma kpughee m na ụlọ ọrụ ọhụụ, gbakwunyere mgbe niile.
Enwekwara m ụfọdụ ozi ịntanetị na-atọ ọchị na-aga n'ihu na-arụ ụka banyere ịdị mma maka njikwa ngwaahịa anyị. Nke a bụ mkparịta ụka na-atọ ọchị mgbe niile, ihe ize ndụ nke ịbupụ ihe ọ bụla ma ọ bụ wepụta ihe nwere ike ọ gaghị adị mma. Ọ bụ oku siri ike. Aga m atụkwasị obi na ndị mmepe anyị wee hụ ụdị anwansi ha nwere ike ime.
Aga m aza ajụjụ maka ya, yabụ na-etinye onwe m ebe ahụ. Ndị mmadụ na-eju gị anya mgbe ị nyere ha ike. Nke ahụ bụ ihe m na-ekwusa, yabụ m ga-ebi ndụ n'okwu m!
Enwetụbeghị m blogger ọbịa ebe a kama ọ ga-enwe obi ụtọ ịkekọrịta ọkụ. Dobe m ikwu ma ọ bụ kpọtụrụ m ọ bụrụ na ị nwere mmasị. Ikwesighi inwe blọgụ, ọ bụ ezie. N'ezie, ọ ga-akara m mma karịa ka onye na-anaghị ede blọgụ sonyere na mkparịta ụka ahụ. Ikekwe ị 'ga - ejide ahụhụ ahụ ".
Maka ndị na-ede blọgụ ibe m, ịnwe onye na-ede blọgụ ọbịa na-eweta ọrụ ma ọ bụ obere ọrụ? Naanị ịmata ihe.
Kwụsị Ide maka Engines Nchọgharị
Mwepụta akwụkwọ! Renée Pawlish: Nefilim, Jenesis nke ihe ọjọọ
Mar 23, 2007 na 1: 28 PM
Ọbịa blọgụ ka na-arụ ọrụ. Ihe a bụ na ị gaghị enwe ike inweta ahụmịhe nke onye na - ede blọgụ dịka ị dị - ọ na - abụkarị ndị na - ede blọgụ ọhụụ na - achọ blọọgụ ọbịa. Enwere nkwukọrịta ọzọ iji mesoo ya.
Mar 24, 2007 na 9: 55 PM
Ọ bụrụ na e nyere m isiokwu m nwere ike ịkọwapụta nke ọma, mgbe ahụ, m ga-enwe obi ụtọ ịbụ ọbịa gị. Nke ahụ bụ otu n'ime ahụmịhe m enwetabeghị, ma ọ bụrụ na m mepụta ya na ndụ ọ ga-abụrịrị otu nnukwu ihe.
Apr 3, 2007 na 12: 27 PM
Ozugbo m wulitere okporo ụzọ, m ga-anwa itinye ndị na-ede blọgụ ọbịa. Ọ dịka ọ ga - abụ ọrụ karịa mana ndị na - ede blọgụ ga - erite uru na mmekorita ahụ. Ọ bụ ihe m chere na ndị ọzọ na-ede blọgụ kwesịrị ime